Ny fahasamihafana eo amin'ny Mitosis sy Meiosis
7 Ny fahasamihafana eo amin'i Mitosis sy Meiois
Ny zavamaniry dia mitombo sy mamerina amin'ny alalan'ny fizarana sela. Ao amin'ny sela eukaryotic, ny famokarana sela vaovao dia vokatry vokatry mitosis and meiosis . Ireo dingana roa fizarana sela dia mitovy amin'ny tsy fitoviana. Ireo dingana roa ireo dia ny fizarazaran'ny sela diploida na sela iray ahitana ketsa roa (chromosome iray avy amin'ny ray aman-dreny tsirairay).
Ao amin'ny mitosis, ny singa ara-panafody ( ADN ) ao anaty sela dia duplicated ary mizara mitovy eo amin'ny sela roa.
Ny sela misara-bolana dia mamaritra ny andiam-pandaharana nomena anarana hoe cyc cell . Ny tsingerin'ny sela miteraka dia atomboka amin'ny fisian'ny singa mitombo na fitovozana hafa izay mampiseho fa ilaina ny famokarana sela vaovao. Ny sela somatic amin'ny vatany dia mamerina amin'ny mitosis. Ohatra avy amin'ny sela somika: ny sela matavy, ny sela , ny sela , ny sela, ary ny cellule cellule izay tsy sela ara - nofo . Mitosisa dia ilaina hanoloana sela maty, sela simba, na sela izay manana fandaniana fohy.
Ny Meiois no dingana izay ahafahan'ny gametes (firaisana ara-nofo) ao amin'ireo zavamananaina izay miteraka firaisana ara-nofo . Ny gameta dia vita amin'ny gonady lahy sy vavy ary ahitana ny antsasaky ny isan'ireo chromosomes ho toy ny sela voalohany. Ny tsimok'aretina virtoaly dia ampidirina amin'ny mponina amin'ny alàlan'ny fanoloran-tsaina izay mitranga mandritra ny metosis. Noho izany, raha oharina amin'ireo selan'ny sela mitovy amin'ny voan'ny mitosis dia mamoaka sela efatra izay tsy mitovy amin'ny sela.
Ny fahasamihafana eo amin'ny Mitosis sy Meiois
1. Divizion'ny sela
Mitosis: Misy sela somaisy manasaraka indray mandeha . Ny cytokinesis (fizarana ny cytoplasma ) dia mitranga amin'ny faran'ny telophase .
Meiois: Mizara roa ny cellule reproduction . Ny Cytokinesis dia mitranga amin'ny faran'ny telophase I sy ny telophase II.
2. Ny laharana finday vavy
Mitosis: Mamokatra sela vavikely roa . Ny cellule tsirairay dia diploid izay mitovy amin'ny isan'ny chromosomes.
Meiois: Misy sela vavy efatra . Ny cellule tsirairay dia haploid ahitana ny iray isan-jato ny isan'ny chromosomes ho toy ny sela voalohany.
Mitosis: Ny sela vavy ao amin'ny mitosis dia ny klônôzianina (mitovy ny azy). Tsy misy famerenana na fifindrana .
Meiois: Ny cellules of the girls in the resulting contain different combinations of genes. Ny fanasitranana ara-pananahana dia miseho vokatry ny fisintahan'ny sela homologous amin'ny sela samihafa ary amin'ny dingan'ny fifindrana (famindrana ny fototarazo eo amin'ny homologous chromosomes).
Mitosis: Nandritra ny dingana voalohany niandohana, fantatra amin'ny hoe prophase, ny chromatin dia miara-penitra amin'ny chromosome miovaova, ny valopy nokleary dia mihintsana, ary ny spindle fibra dia miorina eo amin'ny bara mifanohitra amin'ny sela. Ny sela dia mandany fotoana bebe kokoa amin'ny famaritana ny mitosezika noho ny sela iray amin'ny faminavina ahy amin'ny metosis.
Meiosis: Faminaniana aho dia misy dingana dimy ary maharitra ela kokoa noho ny faminaniana momba ny mitose. Ny dingana dimy amin'ny faminaniana maototika dia leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, ary diakinesis. Ireo dingana dimy ireo dia tsy mitombina amin'ny mitosis. Ny famerenana ara-pinoana sy ny fiampitana dia atao mandritra ny faminaniana I.
Mitosis: Tsy misy ny fanabeazana tetrad.
Meiosis: Amin'ny faminaniana ahy, dia mifamahofaho miara-mamorona ny antsoina hoe tetrada ny sela homologous homologues. Ny tetrad dia misy chromatids efatra (karazany roa kryomatida anabavy).
6. Fanitsiana chromosome amin'ny Metaphase
Mitosis: Ny chromatida anabavy (chromosome duplicated avy amin'ny chromosomes roa mitovy mifandray amin'ny faritra centromere ) dia mifandroraka amin'ny metafasy (fiaramanidina izay mitovy lavitra avy amin'ireo fonosana roa).
Meiois: Tetrads (paikady chromosome homologous) miforitra amin'ny metaphase plate amin'ny metaphase I.
7. Separation Chromosome
Mitosis: Amin'ny anaphase, ny chromatidin'ny anabavy dia manavaka ary manomboka manomboka midronera afomanga voalohany mankany amin'ny biraon'ny sela. Ny chromatid anabavy iray misaraka dia lasa fantatra amin'ny hoe chromosome vavy ary heverina ho chromosome feno.
Meiois: Ny homologous chromosomes dia mifindra monina manoloana ny banga mifanohitra amin'ny cellule nandritra ny anaphase I. Tsy manasaraka ny chromatidin'ny anabavy I.
Mitosis and Meiois similarities
Na dia misy fahasamihafana maromaro aza ny fizotry ny mitosis sy ny meiosis, dia mitovy amin'ny fomba maro koa izy ireo. Samy mitombo isaky ny dingana ny fitambarana, ka ny sela no mameno ny fitaovany sy ny organelles ho an'ny fizarana.
Ny mitoseosis sy ny meiosis dia miteraka dingana: Prophase, Metaphase, Anaphase ary Telophase. Na dia ao amin'ny meiosis aza ny sela, dia mandeha indroa ny sela. Ireo dingana roa ireo ihany koa dia tafiditra ao amin'ny fikarakarana ny chromosomes duplicated, fantatra amin'ny anarana hoe chromatid siramamy, eo amin'ny takelaka metafasy. Izany dia mitranga amin'ny metaphase amin'ny mitosezy sy metaphase II amin'ny meiosis.
Ankoatra izany, ny mitoseosis sy ny meiosis dia mitarika ny fisarahana ny chromatids anabavy ary ny fananganana chromosomes ny zanany. Ity tranga ity dia mitranga ao amin'ny anaphase of mitosis and anaphase II of meiosis. Farany dia samy mifarana amin'ny fizarana ny cytoplasma izay mamokatra sela tsirairay.
Mianara momba ny asidin'ny nokleary
Ny momba ny cellules haploid amin'ny microbiology
Ahoana ary ny anton'izany?
Mianara momba ireo karazana sela samihafa: Prokaryotic sy eukaryotic
Mianara momba ny cellules prokaryotic
Andraikitry ny Centrioles amin'ny Microbiology
10 Zava-misy momba ny sela Kansera
Fepetra momba ny fiarovana ara-pahasalamana ho an'ny chemistry
All About Cupolas
Fitsipika amin'ny teny anglisy amin'ny teny gramma
Ny niandohan'ny Pulque
Inona no atao hoe Septuagesima, Sexagesima, ary ny alahady Quinquagesima?
Dipole definition sy ohatra
Torolalana ho an'ny mpitrandraka alika mahafinaritra
Inona no vokatra Compton ary ahoana no ampiasan'izy ireo amin'ny sivana
5 Ny tranokala fianarana sosialy interactivée ho an'ny efitrano fianarana rehetra
Anarana sy fampiasana 10 gaza
The 50 Most Underrated Musicals
Inona no atao hoe antifreeze?
Panj Bania voafaritra: Inona avy ireo vavaka dimy takiana?
Ireo fitsapa-kevi-bahoaka momba ny fahazoan-dàlana na ny hamehana
Fanontaniana vaovao saro-baliana vaovao ho an'ny fianarana sy ny fifanakalozan-kevitra
Tari-dalana feno amin'ny Abu Ghraib Photos and Scandal
Ny curvature Lorenz
Ny fiainana sy ny lova navelan'ny Jeneraly Filipino Antonio Luna
Alex Haley: Tantara an-tantara
Ny fifandraisana amin'i Kristy-Krishna
Ny Kolontsaina ve no Anisan'ny Raeliana?
Bis oder Encore amin'ny teny Frantsay
108 Anjaran'ny Tompo Shiva
Review: Sailun Atrezzo Z4 + AS
The Monologue Beatrix's Comedic from "Promedy"